सर्वोच्चको आदेशलगत्तै डा. गोविन्द केसी पक्राउ « Ramechhap News
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै डा. गोविन्द केसी पक्राउ
३४ पुस, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको मानहानीको आरोप लागेका डाक्टर गोबिन्द केसी पक्राउ सोमबार साँझ परेका छन् ।
केसी अदालतको आदेशविरुद्ध आजै अपरान्हदेखि १४ औं अनसनमा थिए ।